Warshad mashiinka sandblast otomaatiga ah - Shiinaha Automatic sandblast machine-saareyaasha, shirkado cusub
Qalabka Carro-xoqidda Wareegga Wareega ah ee Dustless
Dib-u-warshadaynta mashiinka ciida, oo si ballaaran loogu adeegsado birta birta ah, mishiinnada, maraakiibta, jidadka tareenka, dhuumaha saliidda
kululeeyaha iyo dhismaha dekedda iyo warshadaha kale ee qaab dhismeedka bir ka saarista miridhku dusha, xoojinta dusha sare;
Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ceeryaanta dusha sare ee birta ahaanta leh Matte, qurxinta xoqidda bilaashka ah ee qurxinta iyo dhalooyinka, dhagxaanta iyo xardhka kale ee dusha sare, buufinta farsamaynta qurxinta.
Dib-u-warshadaynta mashiinka ciida ayaa loo qaybiyaa qayb sandblasting iyo qayb soo kabashada, marka la barbar dhigo mashiinka sandblasting dhaqanka.
astaamaha ugu weyn ayaa ah inay noqon karto mashiin ujeedooyin badan leh. Marka shuruudaha ilaalinta deegaanka ay adag yihiin,
waxaa loo isticmaali karaa mashiin dib-u-habeyn dib-u-warshadayn ah; Mana jiraan wax shuruudaha ilaalinta deegaanka ah, shaqaaluhuna waxay leeyihiin tallaabooyin ilaalin ah
wuxuu noqon karaa qayb sandblasting kali ahaan ah mashiinka ciideed ee furan, hagaajiya waxtarka shaqada, ka dib sandblasting
ka dibna qaybta soo kabashada ee abrasive ee nadiifinta goobta shaqada nadiifinta, dib u soo kabashada walxaha burbursan.
Dib-u-warshadaynta otomaatig ah mashiinnada qarxinta ciidda oo bilaash ah
Vacuum sandblaster soo kabashada aan boodh lahayn soo bandhigo dheriga qaraxa isku dhafan,
Nidaamka ka soo kabashada faaruqinta warbaahinta, iyo soo ururinta boodhka dhammaantood hal unug oo is haysta
(wuxuu ka kooban yahay mashiinka qarxinta nuugga oo leh kontoroolka fog, tuubada qaraxa, isku imaatinka madaxa,
dib-u-soo-celin & kala-sooc iyo nidaamka dib-u-soo-celinta ee hawo-abuurka ah, ururiyaha boodhka iyo gaadhiga).
waxaa si weyn loogu isticmaalaa hoos u dhigida, samaynta qoraalka dusha sare, iyo diyaarinta rinjiga, inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo miridhku ka soo baxa dhulka saliidda
cusbooneysiinta weelka, iwm, iyo nidaamka dib u soo celinta ee hawo-mareenka oo si habsami leh u soo saaray ayaa ka dhigaya in loo isticmaalo iyada oo aan dhibaato lahayn boodh iyo qashin.
Nidaamyada qaraxyada iyo soo kabashada waxaa loo isticmaali karaa in isla mar la qarxiyo oo la soo kabsado (qaraxan wareegga xiran) ama waxaa loo isticmaali karaa qaraxa hawada furan ka dibna nadiifinta abrasive ee xigta.
Qarax isku mid ah iyo dib u soo kabasho waxay baabi'isaa daruuraha boodhka, aragga oo liita iyo nadiifin qaali ah.
Awoodda qarxinta madax-bannaan iyo soo-kabashada waxay ka dhigeysaa BRS qalab wax soo saar leh oo dhinacyo badan leh oo ku habboon dalabyo badan oo kala duwan.
Vacuum Bunch wuxuu ku habboon yahay walxaha waaweyn sida hareeraha markabka, taangiyada waaweyn iyo dusha sare ee buundada la taaban karo.
Nooca otomaatigga ah ee mashiinka qarxa ciidda
Mashiinka qarxa ciid otomaatig ah
1..Coomaha otomaatigga ah ee otomatigga ah ee qarxiska joogtada ah ee ciida sand.jog iwm
Naqshadeynta 3.Novel, xarrago, qaab-dhismeed fudud, iyo fududahay in la shaqeeyo
4.Front durbaan .Fudud in la beddelo oo gogo 'shaqada qaado
5. Mashiinka wuxuu ku soo ceshay bacaadka habka gudbinta / baaldi wiishka, wuxuu isticmaali karaa ciid kasta (sida birta birta ah, birta birta iwm ciid adag)
6 Iyada oo isla dhexroor biiyaha ah, waxtarka mashiinka sandblasting cadaadiska waa 3-5times ka badan caam ahaanta ciida mashiinka qarxa
Kabadh sandblast otomaatig ah oo loogu talagalay qaybo yaryar
Qalabka ciidda ayaa qarxa by xawaare sare xawaare Rotary on alaabada caag ah si meesha looga saaro dillaac, flake, iyo convex ee godka alaabta
Awoodda qarxinta waxaa xakameynaya isbeddelka mawjadaha ku yaal koontaroolka.
Mashiinkaan waxaa lagu qalabeeyaa shaashad naxdin leh iyo nidaam wareegga xasaasiga ah, qalabka bacaadka dib ayaa loo isticmaali karaa.
burriga wanaagsan iyo qalabka ciidda waxaa lagu soo ururin karaa boodh aruuriyaha, kuwa waaweyn shaashadda ayaa lagu sifeyn karaa.
Waxay ku qalabeysan tahay matoor anti-static iyo biiyaha, yaraynta burr iyo ku dhejinta budada waxayna dheereyneysaa nolosha maadada.
qolka wax lagu qarxinayo waxaa lagu sameeyay qaansada band, waana lagu daboolay caag.
waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida sheyga.
isticmaalka maaddadu waxay kuxirantahay alaabada
Qalab Qalab tayo sare leh oo Qalab Qalab Qalab Qalab HST-101 ah
1. Qalabkan waxaa loo qaabeyn karaa 7 qori oo buufin ah. Darajooyin 360 ah oo la hagaajin karo si loo hubiyo in uumid isku mid ah dusha sare ee badeecada
2. Muuqaalka ugu weyn ee qalabkan ayaa ah in ujawaabidda ballaaran ay si joogto ah u rogrogmato,
ma jiro joogsi goos goos ah oo dhexda jooga, iyo waxtarka qaraxa si weyn ayaa loo hagaajiyay. Waa xulashada koowaad ee shaqooyinka caadiga ah ee waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
3. Ujawaarida ballaaran ayaa si isdabajoog ah u wareegeysa, is-beddelka soo noqnoqda ee stepless waa la hagaajin karaa, waxaana lagu hagaajiyaa shuruudaha macaamiisha macaamiisha.
6 Qoryaha isqarxinta Qalabka ciladda otomaatiga ah ee Beltka ah
Waxay ku habboon tahay farsamaynta baaxadda weyn ama tuurista qaybo yar yar (aluminium zinc loo shubay, qaybo been abuur ah), ka saarista miridhku, soo dejinta, bremsstrahlung, calaamadaha biyaha, iwm;
Ciidda lagu dabaqi karo mashiinka sandblasting:
Maqaarka wax duqayn kara:
Alumina, ciid birta dahabka ah, kubbada dhalada ah, ciid walnut ah, ciid cusbi ah, kubad bir fiican leh, ciid bir ah, kubad bir birta ah, kubbadda aluminiumka, iwm;
Kombaresarada hawada Piston
Taxane KB kombaresarada hawada cadaadis sare warshadaha waxaa loo isticmaalaa in qufulka pneumatic
qalab pneumatic, sicir bararka taayirka, habka afuufa, rinjiga lagu buufiyo
cufnaanta ciida iyo walxaha dareeraha ah. Nooca awooda badan ee naqshadeynta madaxa weyn, isticmaal waxyaabo wanaagsan oo kugu filan.
Naqshadeynta xoojinta qaybaha ugu muhiimsan, cabirka qalabka gacanta
miisaanka oo dhan in ka badan warshadaha kale, nabadgelyada sare, iyo xawaaraha hooseeya
gaar ahaan ku habboon waajibaadka culus, hawlgal waqti dheer socda
gaar ahaan isku halaynta sare iyo nolosha muddada dheer. Gaar ahaan naqshadeynta qaboojinta hawada iyo naqshadeynta socodka hawada
heerkulka qiiqa oo hooseeya.ma fududa in la dhigo kaarboonka iyo waxtarka sare.
Mashiinka qarxa muraayadda
Waxyaabaha: 3.5 mm saxan bir ah oo duudduuban oo qabow qafiif ah
Cabirka: 1400mm * 1400mm * 1900mm
Cabirka qolka shaqeeya: 1400mm * 1400mm * 800mm
Cabbirka sanduuqa aruurinta boorka: 1300mm * 850mm * 2150mm
Taageere ka saarida Boorka: 3000W 380V 50HZ
Ujawaab weyn: 850 × 15mm qaro weyn, xawaare: 5 jeer / min
Ujawaab ballaaran oo loogu talagalay xawaaraha go'an
Wareeg yar: 100 × 10mm qaro weyn
Xawaaruhu waa: 0-40 / min
Suunka xamuulka qaada Qalabka otomaatigga ah ee Sand-ka Qalabka mashiinka wax lagu dhejiyo
Lambarka qoriga: 8 kumbiyuutarada
Ballaca xamuulka: 1- 2m (Waa la beddeli karaa)
Nooca hawlgalka: otomaatiga ah
Noocan ah gudbinta mashiinka sandblasting otomaatiga ah ee ku habboon nuuradda, marmar, granite, dhagaxa ciida iwm
Mashiinka sandblasting gudbinta otomaatiga ah
Nadiifinta ballaaran ee dhagaxa. Marmar, granite
Iyada oo leh suunka iswada
Qoriga Dabka Mashiinadan taxanaha ah waxaa lagu qalabeeyaa 2-50 nooc oo qoryaha buufinta ah.
Qori kasta oo buufin ah wuxuu leeyahay xakameyn gooni ah
Waxay yareyn kartaa walxaha bacaadka ah ee ku lifaaqan qalabka shaqada ka dib marka la farsameeyo.
Waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo cabirka qalabka shaqada ee macaamiisha iyo qaabka iyo wax soo saarka.
Waxaa sidoo kale lagu qalabeyn karaa qalab ururin boodh qoyan sida ku cad shuruudaha shaqada ee macaamiisha.
Buufiyo qoriga iyo santuuqa qoriga, waxaa lagu dhejin karaa iyadoo loo eegayo cabirka qalabka shaqada, waana la beddeli karaa 360 digrii, sidaa darteed
workpieces lagu sandblast karaa
2021 Nooca cusub ee mashiinka ciideedka nooca durbaan toos ah
Mashiinka sandblasting Automatic yimaado la Roll iyo ujawaab
Waxay noqon kartaa qarax toos ah ama gacan. waxay ku habboon tahay qaybo yaryar sida boolal iwm sidoo kale waxay ku habboon yihiin qarxinta qaybo culus sida wasakhda
1. Waxay si otomaatig ah u qarxin kartaa ciidda waqtigaas isla markaana ku orodsan kartaa shaqada meelaynta;
2. Qaybta shaqadu waa fududahay in la raro lana raro, si fudud loo hawlgalo, loona keydiyo kheyraadka dadka;
3. Cabbirka rooga iyo qoriga waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha;
4. Waxay ku habboon tahay wax soo saar ballaaran oo qaybo yar-yar oo shaqo ah, sida madaxyada jiinyeerrada, jajabyada mashiinnada wax lagu duubo, qoditaanka daloolinta, iwm.
5. Miisaanka Drum Loading: 15-20kg
Rullaluistemadka si toos ah ayaa loo hagaajin karaa, iyadoo loo eegayo xawaaraha wareegga shaqada ee kala duwan,
oo lagu dhajiyay maqaarka silikoon si looga hortago shilka iyo dhaawaca shaqada, duubku sidoo kale waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo cabirka qaybta shaqada iyo daloolka;
Iyada oo si otomaatig ah loo afuufo, si otomaatig ah loo afuufo, boodhka digniinta tilmaanta waqtiga, joogsiga iyo shaqooyinka kale;
Qaado qori toos u qaadista qoriga, qoriga buufinta ayaa dooran kara 1-4 qori,
qoriga buufinku wuxuu leeyahay kontorool gooni ah, wuxuuna leeyahay laba shaqooyin oo ah buug gacmeed iyo otomaatig;
Nooca kala soocida duufaanka, soo kabashada otomaatiga ah iyo dib u warshadaynta qalabka ciidda,
kala soocida otomaatiga ah ee ciida iyo siigada si loo yareeyo cunitaanka alaabada ciida, fududahay in la xakameeyo isticmaalka cabirka hadhuudhka ciidda
Mashiinka wuxuu leeyahay laba nooc oo shaqada ah: buug gacmeed iyo otomaatig
Moodooyinkaan taxanaha ah waxaa loo habeyn karaa 3-4 qoryaha moodooyinka aan caadiga ahayn;
Abrasives lagu dabaqi karo: corundum bunni, corundum, kuul quraarad, iwm.; haddii la cadaadiyo, birta la nadiifiyo sida birta birta ah iyo kaniiniga birta ah ayaa la isticmaali karaa.
Adeegsada: Ku habboon hawlgalinta dufcad tiro badan oo qaybo yaryar oo shaqo ah. Tusaale ahaan: Bake-lite products,
fur nuts, biraha daloolinta, qasabadaha siligga, madaxyada dufcadda, madaxyada jiinyeerrada, agabka moobiilka, akril, alaabada caagga ah, naxaasta, aluminium iyo alaabooyin kale.